I-Sunset @ Cliff ikhaya leholide elingasemanzini ngokuphelele
MacLeay Island, Queensland, i-Australia
I-indlu yeholidi ephelele ibungazwe ngu-Paula
Buyela emuva futhi unethezeke kule ndlu yeholide engasemanzini ezolile, esesitayeleni etholakala endaweni eyihlathi elinemvula emangalisayo kanye nesiqongo sesihlahla kwesokudla sonqenqema lwamanzi.
Ukubuka kwe-panoramic ipharadesi lababukeli bezinyoni.
Indawo ekahle kakhulu yazo zonke izinsiza ezinkulu. I-Macleay Island Jetty, irempu yezikebhe nezikebhe, kanye nolwandle olunesihlabathi ukuhamba ibanga elingu-600m. Isuphamakethe, Iphabhu yendawo, isitolo samabhodlela, Iposi, Ikhemisi, Imithi, Izitolo Ezihlukahlukene 200m. Amathilomu Amakhulu, ihadiwe, Ipaki yoMkhandlu, Ijimu yangaphandle, ipaki ye-Skate, i-BMX Trail, i-Nature Trails 100m.
Le ndlu yesimanje ye-treetop inamakamelo okulala ayi-2, igumbi lokugezela eli-1 kanye nekhishi elihle eligcwele izinto zegesi. Ukuziqhayisa nge-balcony yangasese enokubukwa okuhle kwe-waterfront, ebheke entshonalanga nokushona kwelanga okumangalisa kakhulu.
Igceke lezakhiwo elibheke emanzini lingumqansa kakhulu futhi alifinyeleleki ezivakashini. Kukhona ukufinyelela olwandle olunesihlabathi ukuhamba ngezinyawo, i-jetty kanye nezikebhe e-Macleay Island Jetty. 650m ukusuka ku-29 Cliff Terrace.
I-Macleay Island (Jencoomercha)
Kuningi ongakwenza esiqhingini saseMacleay, ngeklabhu yezitsha, iklabhu yezikebhe, inkundla yegalofu, amabhishi okubhukuda nokudoba kanye nezindawo zokosa inyama emapaki angasogwini. Umgwaqo ovaliwe unqamula maphakathi nesiqhingi usuka esikhumulweni semikhumbi eningizimu uye epikinikini yasePat's Point kanye nendawo yokubhukuda enyakatho. Umzila oxhumanisa iMacleay nesiqhingi esaziwayo sasePerulpa.
I-Potts Point iyindawo edumile yamapikiniki nokubhukuda. I-Dalpura Beach, ogwini olusentshonalanga yesiqhingi, iyindawo ephezulu yokuphumula, ukosa inyama noma ukubhukuda. Lokhu ngokungangabazeki indawo engcono kakhulu yokubona ukushona kwelanga okumangalisayo.
Kunamarempu amaningi esikebhe okwenza le ndawo ibe yindawo enhle yabalandeli bezikebhe nokudoba. Futhi, ngesiko lobuciko elichumayo, i-Macleay Island nayo inezinhlobonhlobo zamagalari okufanele zihlolwe.
Ngenkathi iMacleay ingeyesibili ngobukhulu eziqhingini eziseNingizimu ye-Moreton Bay ngo-6.5km ubude no-4km endaweni yayo ebanzi kakhulu, iziqhayisa ngabantu abaningi kakhulu.
Noma yiziphi izinkinga, sicela usishayele!